Galaxy Book S: famaritana, vidiny ary fandefasana | Vaovao momba ny gadget
Samsung Galaxy Book S: solosaina findainy vaovao an'ny marika
Miaraka amin'ireo findainy avo lenta vaovao, Samsung dia namela antsika vaovao bebe kokoa tamin'ny hetsika fampisehoana. Ny marika koreana dia manolotra ny solosaina findainy vaovao ny Galaxy Book S. Ity solosaina finday ity dia aseho ho ny tsara indrindra navelan'ny orinasa anay hatreto, manambatra ny solosaina findainy tsara indrindra sy ny findainy, araka ny nambarany. Ho an'ny zavatra ampanantenainy ary betsaka.
Solosaina finday iray izay manokatra sakana vaovao ao amin'ny katalaogin'ny solosaina. Amin'ity tranga ity dia mifantoka indrindra amin'ny sehatry ny ny fivezivezena sy ny fifandraisana amin'ity Galaxy Book S ity. Mikatsaka ny hamela antsika amin'ny zavatra hafa noho ny zavatra hitantsika amin'ny solosaina finday hafa eny an-tsena izy ireo.
Ny famolavolana ny solosaina finday dia miavaka amin'ny maha-izy azy mahia, maivana ary misy fisehoana bezela somary manify. Izy io dia manolo-tena amin'ny hatsarana maoderina kokoa, izay tsy isalasalana fa hanintona ny mpanjifa. Ankoatr'izay, amin'ny sehatra teknika, mahita laptop matanjaka miaraka amin'ny fampisehoana tsara isika.
1 Famaritana Galaxy Book S
Famaritana Galaxy Book S
Samsung dia nanambatra ny heriny niaraka tamin'i Microsoft sy Qualcomm amin'ny famoronana an'ity kahie ity. Mazava ny valiny, iray amin'ireo solosaina finday tsara indrindra navelan'ny marika Koreana ho antsika hatreto. Fampisehoana tsara, famolavolana maoderina, ary specs tsara amin'ny ankapobeny, noho izany dia ho solosaina finday ilaina eo amin'ny tsena. Ireto ny andinindininy feno momba ny Galaxy Book S:
Screen: 13,3-inch FHD TFT (16: 9) efijery mikasika sy 1.920 x 1.080 vahaolana
Processeur: Qualcomm Snapdragon 8cx 7nm 64-bit Octa-core farafahakeliny 2.84 GHz + 1.8GHz
Fitoerana anatiny: 256/512 GB SSD (azo ovaina miaraka amin'ny slot MicroSD hatramin'ny 1 TB)
Batterie: sarany ho an'ny 42Wh ary fahaleovan-tena hatramin'ny 23 ora amin'ny filaharana video
Fifandraisana: Nano SIM, Bluetooth 5.0, USB-C, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2.4 / 5GHz), VHT80 MU-MIMO
Rafitra miasa: Windows 10 Home sy / na Pro
Ny hafa: sensor fingerprint miaraka amin'ny Windows Hello
Refy: 305,2 x 203,2 x 6,2-11,8 mm
Milanja: 0,96 kg
Ny iray amin'ireo lafiny lehibe amin'ny Galaxy Book S dia izany mampiasa ny processeur Snapdragon 8cx. Chip iray misy lanja lehibe eo amin'ny tsena izy io, izay marobe marika marika laptop no mampiasa. Misaotra azy io, ny fivezivezena sy ny fifandraisana amin'ny finday sy ny herin'ny solosaina dia azo alaina ao amin'ny solosaina finday. Fampifangaroana izay mahaliana azy izaitsizy, mba hahazoana tombony azo avy amin'izany. Izy io dia miaraka amina RAM 8 GB sy fitambarana fitehirizana roa, izay azontsika atao ny manitatra amin'ny fotoana rehetra.
Ny efijery laptop dia mikasika, izay hahafahantsika mifanerasera aminy amin'ny fomba samihafa. Ny antsipiriany mahaliana an'ity Galaxy Book S ity dia ny tsy fisian'ny mpankafy, satria tsy mafana be toy ny solosaina finday mahazatra. Mamela fahaleovan-tena tsara ho antsika koa io, araka ny nambaran'ny orinasa. Ny fifandraisana dia miasa amin'ny 4G amin'ity tranga ity, noho izany dia tsy mila mifandray amin'ny WiFi amin'ity tranga ity isika. Na dia mieritreritra aza fa mila drafitra angon-drakitra hahafahana mampiasa azy. Manana slot ho an'ny nano SIM izy, izay mamela azy hampiasaina amin'io lafiny io.
Ny rafitra miasa amin'ity tranga ity dia Windows 10, ao amin'ny kinova Home and Pro, samy misy. Manamafy ny orinasa koa ny fisian'ny sensor amin'ny dian-tànana, mba hahafahana miditra amin'ny Windows Hello. Fepetra fiarovana fanampiny amin'ny solosaina findainy, izay manakana ny olona tsy hiditra azy raha tsy mahazo alalana, ohatra.
Ny Galaxy Book S dia hamidy amin'ity fararano ity, satria Samsung dia efa nanamafy tamin'ny fomba ofisialy. Na dia hanao izany any amin'ny tsena voafantina aza izy, ka amin'izao fotoana izao dia tsy fantatsika raha hanangana azy any Espana ny orinasa koreana. Tsy maintsy miandry herinandro vitsivitsy isika vao hahazo angona bebe kokoa amin'ity lafiny ity.
Navoaka tamin'ny loko roa izy: volondavenona sy volamena. Any Etazonia, ny vidiny voalohany dia 999 dolara, toy ny efa nohamafisin'ny marika Koreana. Saingy tsy fantatray izay ho vidiny amin'ny fanombohana azy any Eropa. Ka manantena izahay fa hanana fampahalalana bebe kokoa momba izany atsy ho atsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » solosaina » Samsung Galaxy Book S: solosaina findainy vaovao an'ny marika
Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition: Ny New Watch Edition
Mailrelay: Fitaovana hamoronana ny doka am-barotra amin'ny mailakao